ဖုန်းပေါ်တွင် VC ကိုထံမှဂီတကယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - ဖုန်းကို - 2019
က c Android ဖုန်းနဲ့ iPhone ပေါ်တွင် VC ကိုထံမှဂီတကို download လုပ်လုပ်နည်း
Excel ကိုအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါ, သင်အတော်လေးမကြာခဏခင်းကျင်းစာရွက်တစ်သိသာသောအဘို့ကိုသာတွက်ချက်ရန်နှင့်သုံးစွဲသူမှအချက်အလက်များ၏ဝန်သယ်မထားဘူးကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိအခွအေနေဖြတ်ပြီးလာနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုသာအာကာသကိုတက်ယူနဲ့အာရုံစူးစိုက်အာရုံပြောင်းသွားစေပါတယ်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးမတော်တဆင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှောင့်အယှက်လျှင်အပြင်, ကစာရွက်စာတမ်းအတွက်တွက်ချက်မှုများတစ်ခုလုံးကိုသံသရာတစ်ချိုးဖောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဖုံးကွယ်ဖို့ထို့ကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သော line သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်ကောင်း၏။ သင်တို့သည်လည်းကိုယ့်ကိုယာယီမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သူတို့ကနှောင့်အယှက်မပေးပါဘူးသောဒေတာများဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အဘယျသို့နညျးလမျးရှာကြပါစို့။
Excel ကိုအတွက်ဝှက်ဆဲလ်တွေတော်တော်များများလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ အသုံးပြုသူသည်ကိုယ်တော်တိုင်ကတိကျတဲ့ဗားရှင်းသုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်သည့်အခြေအနေကနားလည်နိုင်အောင်သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြ။
Method ကို 1: အုပ်စုဖွဲ့
သငျသညျအုပျစုလိုစာရွက်လိုင်းကို Select လုပ်ပါ, အဲဒီနောက်ဖုံးကွယ်။ ဒါဟာတစျခုလုံးကိုလိုင်းခွဲဝေချထားပေးရန်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, ကအုပ်စုဖွဲ့လိုင်းများအတွက်တစ်ဦးတည်းသာဆဲလ်မှတ်သားဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက် tab ကိုသွားပါ "ဒေတာများ"။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "ဖွဲ့စည်းပုံ"အဆိုပါဖဲကြိုး tools များပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးသော, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အုပ်စု".
အတန်းသို့မဟုတ်ကော်လံ: ဒါဟာသင်အုပ်စုကိုဖို့လိုအပ်အတိအကျအဘယ်အရာကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့သေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်, ဖွင့်လှစ်။ ကျနော်တို့ကလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်အုပ်စုတစ်စုရန်လိုအပ်ပါတယ်ကတည်းက default အနေနဲ့ switch ကိုကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်သောအနေအထား၌တည်ရှိ၏ကြောင့်, setting များကိုမဆိုအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်မရကြပါဘူး။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းသည်ပြီးနောက်။ အထဲတွင်တည်ရှိပြီးသောဒေတာများဖုံးကွယ်ထားရန်, ဖွင့်သင်္ကေတအားဖြင့် icon ကို click "အနုတ်"။ ဒါဟာဒေါင်လိုက် coordinate panel ကိုရဲ့ဘယ်ဘက်အပေါ်တည်ရှိပါတယ်။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, လိုင်းများဝှက်ထားလျက်ရှိသည်။ နောက်တဖန်သူတို့ကိုပြသနိုင်ဖို့, သင်နိမိတ်လက္ခဏာကို click ရန်လိုအပ်ပါတယ် "Plus အား".
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုအတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုပ်ဖို့ဘယ်လို
Method ကို 2: နှင်းဆဲလ်
ဆဲလ်ရဲ့ contents ဖုံးကွယ်ဖို့ဆုံးထိုးထွင်းသိမြင်လမ်းဖြစ်ကောင်းညှို့နယ်နိမိတ်ဆွဲသည်။
လိုင်းအရေအတွက်လိုင်း၏အောက်ပိုင်းနယ်နိမိတ်ပေါ်တွင်မှတ်သားရှိရာ panel ကို၏ဒေါင်လိုက်သြဒီနိတ်ကျနော်တို့ဖုံးကွယ်ထားချင်ရာရဲ့ contents ပေါ်တွင် cursor သတ်မှတ်မည်။ အဆိုပါ cursor အထက်သို့နှင့်အောက်သို့ညွှန်ကြားထားသောနှစ်ဆမြှားနှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်၏အသွင်သဏ္ဌာန်တစ်ခုအိုင်ကွန်အသွင်ပြောင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါမှသာလက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှိပ်ခြင်းနှင့်အောက်ပိုင်းနှင့်အထက်ပိုင်းလိုင်းများနယ်စပ်ကိုပိတ်ဖို့မဟုတ်သည်အထိတို့အထက် pointer ကိုဆွဲယူပါ။
အဆိုပါ string ကိုဝှက်ထားလိမ့်မည်။
Method ကို 3: ဝှက်ဆွဲအားဖြင့်ဆဲလ်တစ်အုပ်စုတစ်စု
ဖုံးကွယ်ထားရန်ဆန္ဒရှိသောဒေါင်လိုက်သြဒီနိတ် panel ကအုပ်စုတစ်စုအတန်းကိုရွေးဖို့လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှိမ့်ချကိုင်ထားပါ။
ကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးလြှငျ, အောက်ပါအတိုင်းဒြပ်စင်ကို select: ငါတို့သည် coordinate အဆိုပါ panel ကိုအပေါ်စစ်ခင်းကျင်း၏ပထမလိုင်းအရေအတွက်ကိုပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ button ကိုနှိပ် အဆိုင်း နှင့်ပစ်မှတ်အကွာအဝေး၏နောက်ဆုံးအရေအတွက်ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
တဦးတည်းပင်မျိုးစုံတစ်ဦးချင်းစီလိုင်းများရွေးနိုင်သည်။ ဒီအဆုံးမှသူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီခလုတ်ကိုကိုင်ထားစဉ်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှင့်အတူကို click လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် Ctrl +.
ဤအလိုင်းမဆို၏အောက်ပိုင်းနယ်နိမိတ်ဖို့ cursor ဖြစ်လာခြင်းနှင့်နယ်စပ်တံခါးပိတ်မဟုတ်ပါဘူးတိုင်အောင်တက်ဆွဲထုတ်။
Method ကို 4: Context Menu က
သင်တန်းနှစ်ခုသည်ယခင် options များ, အရှိဆုံးအလိုလိုသိနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူ, ဒါပေမဲ့သူတို့နေဆဲအပြည့်အဝပုန်းခိုဆဲလ်တွေမပေးနိုငျသညျ။ ဆဲလ်တိုးချဲ့ကျောပေါ်ဖမ်းမိနိုင်သေးငယ်တဲ့အာကာသအမြဲရှိပါသည်။ လုံးဝ string ကိုဆက်စပ် menu ကို အသုံးပြု. ဖြစ်နိုင်ဖုံးကွယ်။
သီးသန့် mouse ကို၎င်း,
သော့သုံးပြီး Ctrl +.
ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကို၏သြဒီနိတ်ဒေါင်လိုက်စကေးပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ တစ်ဦးက Context Menu ကပေါ်လာသည်။ အမှတ်အသားကို item "ဝှက်".
Method ကို 5: tool ကိုအစာကျွေးခြင်း
ဒါ့အပြင်သင် tool ကိုခါးပတ်အတွက်ခလုတ်ကိုသုံးပြီးအတန်းဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျဖုံးကွယ်ချင်သောအတန်း၌ရှိကြ၏သောဆဲလ်များကိုရွေးချယ်ပါ။ မြေတပြင်လုံးလိုင်းခွဲဝေချထားပေးရန်မှယခင်နည်းလမ်းမတူဘဲလိုအပ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ tab ကိုမှဖွင့် "အိမ်"။ ဒီ tool ခါးပတ်ပေါ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Format ကို"အဆိုပါလုပ်ကွက်များတွင်ထားရှိသော "ဆဲလ်"။ အဆိုပါပြေးစာရင်းတစ်ခုတည်းအမှတ်အုပ်စုတစ်စုအပေါ် cursor ကိုညွှန်ကြား "မြင်နိုင်စွမ်း" - "Hide သို့မဟုတ်ဖော်ပြရန်"။ နောက်ထပ် menu ကထဲမှာ, ရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်ဖို့လိုအပျသော item ကို select လုပ်ပါ - "ဝှက်တန်း".
Method ကို 6: filtration
မလိုအပ်ပါဘူးတဲ့အရွက်အကြောင်းအရာဖုံးကွယ်ရန်အလို့ငှာ, သင် filter များလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မထားဘူး။
တစ်ခုလုံးကိုစားပွဲပေါ်မှာသို့မဟုတ်သူမ၏ဦးထုပ်ထဲတွင်ဆဲလ်၏တဦးတည်းရွေးချယ်ပါ။ tab ကို "အိမ်" အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စီ & Filter ကို"ဒီ tool box ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ဘယ်ဟာ "တည်းဖြတ်ခြင်း"။ ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါအရာလုပ်ရပ်တွေကို၏စာရင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ် "Filter ကို".
ဒါဟာမဟုတ်ရင်လုပ်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ခွဲဝေစားပွဲပေါ်မှာသို့မဟုတ်ထုပ်ပြီးနောက် tab ကိုသွားပါ "ဒေတာများ"။ ခလုတ်ကိုကလစ် "Filter ကို"။ ဒါဟာယူနစ်အတွက်တိပ်ပေါ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် "စီ & Filter ကို".
သငျသညျစားပွဲပေါ်မှာ header ကို filter ကိုအိုင်ကွန်၏ဆဲလ်များတွင်အသုံးပြုကြပြီမဟုတ်နှစ်ခုအဆိုပြုထားနည်းလမ်းတွေထဲကဘယ်ဟာကို။ ဒါဟာအသေးအနက်ရောင်တြိဂံ, အအောက်ဖက်ထောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒေတာတွေကိုစီစစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာပါရှိသည်သောကော်လံမှအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
filter ကို menu ကိုဖွင့်လှစ်။ ဖုံးကွယ်ဖို့ဒီဇိုင်း, အတန်းများတွင်ပါရှိသောတန်ဖိုးများထံမှ tick ဖယ်ရှားပါ။ ထိုအခါ button ကို click "အိုကေ".
ဒီစစ်ဆင်ရေးပြီးနောက်ကျနော်တို့ကို tick ဖယ်ရှားရာမှတန်ဖိုးများရှိပါတယ်ရှိရာအပေါငျးတို့သအတန်းတစ် filter ကိုအားဖြင့်ဝှက်ထားလိမ့်မည်။
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုအတွက် data တွေကို sorting နှင့် filtering ကို
Method ကို 7: ဆဲလ်တွေဖျောက်ထားခြင်း
အခုတော့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်တွေဖုံးကွယ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ ၏သင်တန်းသူတို့တစ်တွေလမ်းလည်းမရှိ, ဤစာရွက်စာတမ်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဖကျြဆီးပါလိမ့်မယ်အဖြစ်တစ် line သို့မဟုတ်ကော်လံအဖြစ်လုံးဝဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ပေမယ့်အားလုံးအတူတူပင်မနိုင်လုံးဝဒြပ်စင်ပုန်းရှောင်မရလျှင်, ထို့နောက်သူတို့၏ contents တွေကိုဖုံးကွယ်။
သငျသညျဖုံးကွယ်ချင်သောတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဆဲလ်တွေကိုရွေးချယ်ပါ။ ရွေးချယ်ထားသည့်စာသားပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ right-click လုပ်ပါ။ တစ်ဦးက Context Menu က။ ဒါဟာအတွက် item ကို Select လုပ် "Format ကိုဆဲလ် ... ".
ယင်းပုံစံချပေးဝင်းဒိုးကိုလွှတ်တင်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏ tab ကိုသှားဖို့လိုအပျ "နံပါတ်"။ ထို့ပြင်အဆိုပါ parameter သည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု "နံပါတ်ကို formats" အနေအထားကို select "အားလုံး Formats"။ လယ်ပြင်၌လက်ျာ pane ထဲကကို "အမျိုးအစား" ကျနော်တို့ကအောက်ပါစကားရပ်မောင်းထုတ်ရန်ကြိုးစားနေ:
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ" settings ကိုကယ်ဖို့။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ထို့နောက်ရွေးချယ်ထားဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ data အားလုံးကိုပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသာမျက်စိမှပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့်တကယ်တော့မရှိစေရန်ဆက်လက်။ ဒီအတည်ပြုရန်ရုံကိုသူတို့ပြသတဲ့ပုံသေနည်းဘားမှာကြည့်ပါ။ သင်ဆဲဆဲလ်ထဲမှာအချက်အလက်များ၏ Display ကို enable လုပ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင်ယခင်ကဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုပုံစံကသူတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ပြတင်းပေါက်မှတစ်ဆင့် format ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, သင် Excel ကိုအတွက်တန်းစီဖုံးကွယ်နိုင်သည့်အတွက်အများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများစုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုကြပါတယ်: filtering ကို, အာဆီယံ, ဆဲလ်နယ်နိမိတ်ကိုထေမိ။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူ task ကိုများအတွက်ကိရိယာဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ သူကတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အခြေအနေမှာပိုပြီးသင့်လျော်သောအဖြစ်ကိုပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့ကိုယ်အဘို့ရိုးရှင်းသောစဉ်းစားသော option ကိုသုံးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် format ကိုသုံးခြင်းဖြင့်ကတစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်ရဲ့ contents ဖုံးကွယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: ဘၾကင စအၾကဆဖနတက ယသငတလ ??? (စက်တင်ဘာလ 2019).